FANABEAZANA : Tonga hatrany amin’ireo toerana lavitra andriana ny fikambanana « écoles du monde »
Ambondro Am-pasy, Anjajavy, Marovaza, Antsangabe, Antanamanakana, manarenja, Maromiandra, Maetsadava, Mangatokana ary Besely, ireo tanàna ireo no misy ny fikambanana ‘Ecoles du monde’ izay manorina sekoly sy mampianatra ny zaza malagasy. 23 mai 2017
Feno 20 taona ankehitriny ny niasan’ny fikambanana ‘ecoles du monde’ eto Madagasikara. Anisan’ny nanamarihana izany ny fitokanana ny sekoly fahafolon’ny fikambanana, ny sabotsy lasa teo, eny Besely, amin’iny Lalampirenena fahaefatra iny. 37km miala an’i Mahajanga no misy ity sekoly vaovao ity. Garabola sy sekoly ambaratonga voalohany no ho hita eny. Tsara sy meva ary manara-penitra avokoa ny efitrano fianarana.
Natao sady hanabe no hampianatra ireo mpianatra no hampirisika azy amin’ny fitiavana ny fianarana ity fikambanana. Hisy ihany koa fotodrafitrasa toy ny kianja filalaovam-baolina ary trano famakiam-boky ho an’ireo mpianatra.
Sekoly mendrika tsara sy manara-penitra ka misy trano fidiovana manara-penitra no atsangan’izy ireo amin’izany. Natao hanabeazana ireo zaza tsy dia mahita ny teknolojia sy ny fandrosoana an-tanàn-dehibe ary karazana varavaran-kely misokatra ho azy ireo izay zanaka tantsaha amin’ny ankapobeny eo amin’izao tontolo izao.
Tanjon’ny sekoly ny hahafahana manome fanabeazana mahomby sy avo lenta an’ireo zaza ambanivohitra manomboka amin’ny fahazazana hatramin’ny kolejy. Hitondra ho azy ireo amin’ny fahafantarana an’izao tontolo izao, ny fahalalana ankapobeny, ary fisokafana amin’ny kanto isan-karazany ihany koa ny sekoly.
Ho an’ireo mpianatra mipetraka lavitra dia misy ny « cantines » izay ny ray aman-drenin’ny mpianatra no mitantana azy tsy andraisana karama. Misy fepetra ihany koa ny fandraisana ireo mpampianatra, ka ireo manana fahaiza-manao no mampianatra ireo ankizy. Ofanina lalandava izy ireo ary misy fifanakalozana amin’ireo mpampianatra sy mpanabe mpilatsaka an-tsitra-po miara-miasa amin’ny ‘ecoles du monde’.
Mifandray amin’ny mpianatra any Frantsa
Mipetraka eny amin’ny toerana misy ny sekoly ny mpampianatra sy mpanabe ary ny mpilatsaka an-tsitrapo. Misy ny fotodrafitrasa maoderina sy raitra andraisana azy ireo. Betsaka ireo mpilatsaka an-tsitrapo izay samy mitondra ny fahaizany avy, ka vokatr’izany ny fisian’ny fambolena, ny fifampiresahana ary ny fandefasana sarimihetsika, sary miaina ary fanadihadiana tahirin-kevitra. Mifandray sy mifanakalo amin’ireo mpianatra any Frantsa amin’ny alalan’ny skype ihany koa ireo mpianatra. Tsy natao ho an’ny ankizy mpianatra ihany anefa fa ny fampianarana fa misy koa ny natao ho an’ny ray aman-drenin’ny mpianatra dia ny fampianarana teny frantsay sy fampianarana manoratra. Mpianatra miisa 80 eo izao no mianatra amin’ny sekolin’ny « Ecoles du monde » eny Besely ity.
Natao ho fitaratra izy io ary hampanarahina azy io avokoa ireo sekoly sivy hafa an’ny ‘ecoles du monde’ efa misy. Ny filamatry ny ‘ecoles du monde’ moa dia manan-jo amin’ny fanabeazana ihany koa ny tontolo ambanivohitra. Teny ihany koa ny nanamarihana ny faha-20 taonan’ny fikambanana ny 20 mey teo, ka nanotrona izany ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena Paul Rabary.